“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख ११ गते बुधबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल” – Etajakhabar
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य उत्तरायण,वसन्तर्तुः,परिधावी नाम संवत्सर,शाके १९४१,सम्वत २०७६ साल वैशाख ११ गते बुधबार नेपाल सम्बत ११३९ चौलागा,सन् २०१९ अप्रिल २४ तारिक कृष्णपक्ष पञ्चमी तिथि अपरान्ह २ वजेर २ मिनेटसम्म,मूल नक्षत्र राती ९ वजेर १ मिनेटसम्म,शिवयोग,तैतिलकरण,आनन्दादियोग ध्वज,सूर्य मेष राशीमा,चन्द्रमा धनु राशीमा ।
मुहूर्त – शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३६ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२८ वजेसम्म रहनेछ । सामान्य गुली काल मुहूर्तः–विहान १०÷२५ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ राहुकाल मुहूर्तः–मध्यान्ह १२÷२ वजेबाट अपरान्ह १÷४० वजेसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–विहान ७÷१० वजेबाट ८÷४७ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ दूरमुहूर्तः– पूर्वान्ह ११÷३६ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२८ वजेसम्म रहनेछ ।
बार वेला – सूर्योदयबाट प्रातः ७÷१० वजेसम्म लाभ वेला,७÷१० वजेबाट ८÷४७ वजेसम्म अमृत वेला,८÷४७ वजेबाट १०÷२५ वजेसम्म काल वेला,१०÷२५ वजेबाट १२÷२ वजेसम्म शुभ वेला,१२÷२ वजेबाट १÷४० वजेसम्म रोग वेला,१÷४० वजेबाट ३÷१७ वजेसम्म शुभ वेला,३÷१७ वजेबाट ४÷५५ वजेसम्म चर वेला र ४÷५५ वजेबाट सूर्यास्तसम्म लाभ वेला रहनेछ ।
बार वेला – सूर्यास्तबाट ७÷५५ वजेसम्म उद्वेग वेला,७÷५५ वजेबाट ९÷१८ वजेसम्म शुभ वेला,९÷१८ वजेबाट १०÷४० वजेसम्म अमृत वेला,१०÷४० वजेबाट १२÷३ वजेसम्म चर वेला,१२÷३ वजेबाट १÷२५ वजेसम्म रोग वेला,१÷२५ वजेबाट २÷४८ वजेसम्म काल वेला,२÷४८ वजेबाट ४÷१० वजेसम्म लाभ र ४÷१० वजेबाट सूर्योदयसम्म उद्वेग वेला रहनेछ ।शुभाशुभ“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति”।
मेषः– कार्य लगनशिलता थोरै बढ्नेछ । मनोरञ्ननमा बढि समय खर्च हुनेछ । परोपकारी काम गरिनेछ । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ । नोकरी तथा राजनीतिबाट कम सन्तुष्टि मिल्नेछ ।
वृषः– दिन प्रतिकुल देखिन्छ । अहार विहारमा ध्यान दिनु होला नत्र स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । कार्य शिथिलता बढ्ला । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । संचित धन नास हुनेछ । सहयोग मिल्ने छैन ।
मिथुनः– नयाँ कार्य योजना अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ । स्वतन्त्र प्रकृतिका व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा खुशि छाउनेछ । मिलेर काम नगर्नु होला विग्रिन सक्छन् ।
कर्कटः– ऋणमा काम नगर्नु होला । मनमा भय त्रास उत्पन्न हुनेछ । कार्य सम्पादनमा कठिनाई आउनेछ । विरोधीको सामना गर्नु पर्ला । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । परिश्रमको अन्तिम परिणम राम्रो आउनेछ ।
सिंहः– अन्योलता बढ्नेछ । विना सोच विचार काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । पठन पाठनमा थोरै सुधार आउनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आँशिक लाभ हुने देखिन्छ । सहयोग अल्प मिल्नेछ ।
कन्याः– पारिवारिक समस्या बढ्नेछन् । होशियार ! धन सम्पतिको नास हुनसक्छ । काम गर्ने जोश जागर घट्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सामान्य प्रगति होला । काम गरेर जश होइन उल्टो अपयश आउनेछ ।
तुलाः– सहास,धैर्यता र पराक्रम बढ्नेछ । अधिकाँश काम आफ्नै बाहुबलबाट सम्पादन हुनेछन् । मित्रहरुबाट सहयोग मिल्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगति राम्रै हुनेछ । भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर काम गर्नु होला ।
वृश्चिकः– जोशमा होस नगुमाउनु होला,संचित धनको नास हुनसक्छ । आफन्तका कारण अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । प्रयत्न पूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ ।
धनुः– समयमा सामान्य सुधार आउनेछ । लगनशिल भई गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी बढ्नेछ । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ ।
मकरः– व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन । काम गरेर जश भन्दा अयश बढि मिल्नेछ । यात्रा गर्दा सतर्क रहनु होला । चोटपटकको भय देखिन्छ । फजुल खर्च बढ्नेछ । मित्रले धोका दिनेछन् ।
कुम्भः–स्वास्थ्य अनुकुल रहला । व्यापार व्यवसायबाट सोचे भन्दा राम्रो आम्दानी हुनेछ । पारिवारिक सुख शान्ति मिल्नेछ । विना सोच विचार काममा हात नहाल्नु अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । मित्रहरुबाट सहयोग मिल्नेछ ।
मिनः– कार्य गोपनियता अप्नाउनु होला । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । पढाई लेखाईमा थोरै प्रगति हुनेछ । ठुलो व्यक्तिसँग सामिप्यता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख १०, २०७६ समय: २१:४८:१२